HAYADA CAAFIMAADKA ADUUNKA (WHO) OO SARE U QAADAY HEERKA CABIRKA CUDURADA FAAFA | Toggaherer's Weblog
Hay’ada Caafimaad ee dunnida (World Health Oragnisation) WHO ayaa shaaca ka qaaday inay sare u qaaday heerka ay ku cabirto halista ka imaan karta cudurada faafa gaar ahaan cudurka Swine Flue ee ka dilaacay dalka Mexico.
Madaxa hay’adan ee Margeret Chan ayaa shalay shir jaraa’iid ay qabatay ku sheegtay in heerka khatarta cudurkan ay tahay mid ay ka dhigeen Level 5 oo ah cabirka ugu sareeya ee in muddo ah la gaarsiiyo cudurada khatarta ah ee fida.
Heerka lixaad ayaa ah heerka ugu danbeeya ee halista cudurada ayadoo ay muujineyso cudurkan Swine flue ee gaaray heerka shanaad halista iyo cabsida hay’ada caalamka ee caafimaadka ka qabto faafida cudurkan.
Cudurka Swine flue ayaa noqday mid si deg degleh ugu faafa wadamo badan oo caalamka ka mid ah, ayadoo wadanka Mexico ay cudurkan ugu dhinteen dad gaaraya 159, halka dalka Maraykanka uu ku dhintay cudurkan cunug yar.
Sidoo kale wadmo ka tirsan dalka Yurub ayaa laga helay cudurkan sida wadanka Jarmalka oo hada sheegay inay jiraan shaqsiyaad cudurkan uu ku dhacay.
Hay’ada WHO ayaa sheegtay in cudurkan markii hore uu ahaa mid ku faafa waxyawaanka, balse heer danbe isu bedalay inuu u gudbo dadka bini’aadamka ah, ayadoo hada uu cudurkan bilaabay inuu noqdo mid faafa oo ay dadka isu gudbiyaan.
Waxaana la sheegay in laga cabsi qabo in ay sii kororta dadka u dhimanaya cudurkan ayadoo sare usii ka ceyso tirada dadka cudurkan uu soo ridanayo. Waxaana dhici karta inuu cudurkan faafidiisa hoos ay u dhacdo, walow sidoo kale la filayo in ay sii faafi karto oo dhimashadana sii kordhi karaan.
Dalalka uu sida ba’an u saameeyey cudurkan oo uu ku jiro dalka Mexico ayaa waxaa shacabka lagu amray inay afka duubtaan xiliyada ay banaanka joogaan, isla markaana qofkii iska arka astaanta cudurkan uu si deg degleh uu u tago xarumaha caafimaadka si loo baaro.
Astaamaha cudurkan ayaa waxaa kamid ah hoos u dhaca dhiiga, madax xanuun iyo waliba qandho xoogleh.
Cudurkan ayaa sidoo kale sabab u noqday in ay wadamada caalamka bilaabaan inay kaydsadaan daawooyinka anti biyootikada ee cudurada hargabka looga hortago.